Madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed oo Baydhabo ku laabtay – Radio Daljir
Febraayo 19, 2018 2:55 g 0
Madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhaba ee xarunta gobolka Baay.
Shariif Xasan ayaa cadaadis xooggan wuxuu kala kulmayaa mudanayaasha baarlamaanka ee maamulka Koonfur galbeed, kadib markii qaarkood ay ka keeneen mooshin la doonayo in isaga xilka looga qaado.
Waxa uu Shariif Xasan sheegay in aan loo baahneyn qalalaasye iyo sidoo kale in la dumiyo maamulka K/galbeed, isaga oo ku baaqay xasilooni siyaasadeed.
Qaar kamid ah xildhibaannada mooshinka ka wada Shariif Xasan oo maanta kulan yeeshay ayaa waxay sheegeen in dhowaan ay guddoonka baarlamaanka u gudbin doonaan mooshinka.
Guud ahaan magaalada Baydhaba waxaa aad looga hadal hayaa xaaladda siyaasadeed ee ka taagan magaaladaasi.